မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အောက်ရှဲလ်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ OEM အမြင့် Precision China Manufacturer
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:မှို Casting Die,ဖိအားသေကာစ်လုပ်ငန်းစဉ်,semi Solid သေကာစ်မှို
Home > ထုတ်ကုန်များ > မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ် > Precision Mg ကာစ် Die > မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အောက်ရှဲလ်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ OEM အမြင့် Precision
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အောက်ရှဲလ်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ OEM အမြင့် Precision မြင့်မားသောတိကျသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပေါ့ပါး၏, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၏ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်သာ။ ပစ္စုပ္ပန်မှာမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုဖန်ဆင်းလျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်ကင်မရာ, ကင်မရာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ, မှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာ, မိုဘိုင်းဖုန်းကို, ဒါပေါ်မှာ TV ကို set ကို, ပလာစမာ Display, hard disk ကို Drive နှင့်ဖြစ်ကြသည်။ အလင်း, ပါးလွှာတိုတောင်းနှင့်အသေးစားလမျးညှနျခ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူမှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာများ, မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများဖြင့်ကိုယ်စားပြု 3C ထုတ်ကုန်, မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုစပ်၏လျှောက်လွှာတိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်ပါပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအသစ်ကသတ္တုကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏သော့နည်းပညာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းကြောင်းသစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲမှကျူးလွန်တာဖြစ်ပါတယ်: အကိုပိုမိုပေါ့ပါး SSC / Mg အလွိုင်းသတ္တုများပုံသွန်း; တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလင်းအလွိုင်းကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း ချ. သေဆုံးအဖြစ်ကျနော်တို့နည်းပညာစုဆောင်းခြင်းနှင့်သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးကိုပိုမိုအာရုံစိုက်လျက်, စက်မှုလုပ်ငန်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုလမ်းကြောင်းသစ် "မဂ္ဂနီဆီယမ်စာပေ" ရှေ့ဆက် ထား. , တရုတ်နှင့်ဂျာမနီမှာမှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်။ စက်မှုစက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မဂ္ဂနီစီယမ် Zun MEIZUN "မရှိသေးငယ်တဲ့သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရလဒ်တွေကို လုပ်. , ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်သို့သင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုဖွင့်ဖို့ 100 ခန့်ကလူရဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ရှိပါတယ်, 101 မဂ္ဂနီဆီယမ် အလွိုင်း semi-အစိုင်အခဲ rheological သေ-သတ္တုများပုံသွန်း, ရှိသမျှတင်သွင်းမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းတစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းစက်, ကုန်ပစ္စည်းစမ်းသပ်မှုနမူနာထွက်သယ်ဆောင်ရန်အကြီးဆုံးအများစုအဆင့်မြင့်ဖွဲ့စည်းသတ္တုနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှစ်ခုစက်ရုံများထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဖောက်သည်ထုတ်ကုန်လိုအပ်ပါတယ်နှစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဌာန, အမိန့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေး၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး။